अनाधिकृत चेक साट्दै सिभिल बैंक सुर्खेत – Dullu Khabar
अनाधिकृत चेक साट्दै सिभिल बैंक सुर्खेत
१९ श्रावण २०७८, मंगलवार ११:३९
सुर्खेत । भेरीगंगा नगरपालिका छिन्चुका व्यवसायी अम्मर ओलीकाे सिभिल बैंक सुर्खेत शाखामा बैंक खाता रहेकाे छ । उनको खाता नम्बर ०८९ १०२६४२११०१३ हो । सोही खाता नम्बरबाट व्यवासायिक तथा व्यक्तिगत कारोबार गर्दै आएको ओलीले जानकारी दिए ।
कारोबारकै शिलसिलामा उनले २०७८ साउन २१ गते साटिने गरि भुपेन्द्र लामिछानेको नाममा चेक नम्बर ०००६९१७२५९ को आफ्नो चेक दिए । उक्त चेकमा रु. ४६ हजार ५ सय रुपैयाँ उल्लेख थियो ।
तर, ‘ब्याक डेट’ (पछि आउने मिति)मा साटिने गरि दिएको उक्त चेक सिभिल बैंक शाखा सुर्खेतका कर्मचारीले साउन १५ गते अर्थात ७ दिन अगावै चेक साटिदिएका छन् । ‘व्याक डेटका लागि दिएको चेक अगावै साटिएर सोही बमोजिम खाताबाट पैसा घटेको मोबाइलमा म्यासेज आएपछि थाहा पाए’ ओलीले भने, ‘बैंकसँग गरिएको कारोबार यसरी अनाधिकृत हुँदा विश्वास घटेको छ ।’
अम्मर आेलीकाे चेक लेजर ।
बैंकले अपराध स्वीकार नगरि आफुलाई चेकमा मिति सच्चाइदिन भन्दै पटक–पटक दवाव दिएकोले फोन स्वीच अफ गरी सम्पर्कविहीन हुन बाध्य बनाएको ओलीले जानकारी दिए ।
बैंकले ‘व्याक डेट’को चेक सटही गर्नु वित्तिय अपराध भएको नेपाल राष्ट्र बैंक कर्णाली प्रदेशका प्रमुख डा. शालिकराम पोखरेलले बताए ।
‘चेक आधिकारिकता हो वा होइन, सटही योग्य छ वा छैन भन्नेजस्ता कुरा प्रमाणित नगरेरै व्याक डेटको चेक सटही गर्नु जघन्य वित्तिय अपराध हो’ डा. पोखरेलले भने ।
‘व्याक डेट’को चेक साटिएको बैंकका शाखा म्यानेजर त्रिलोक उपाध्यायले मानवीय त्रुटीका कारण यस्तो भएको भन्दै स्वीकार गरेका छन् । यद्यपी, सिभिल बैंक शाखा सुर्खेतले गरेको उक्त क्रियाकलाप पश्चात सामाजिक सञ्जालमा समेत बैंकप्रतिको आलोचना बढेको छ ।
Tags: बैंकवीरेन्द्रनगर नगरपालिकासिभिल बैंक सुर्खेतसुर्खेत